Imali ye-Forex | Yintoni iMargin kunye neLungelo kwi-Forex, funda ngeFXCC
I-Forex Inverage & Margin
Bonke abathengisi basebenzisa imali ebolekiweyo ngandlela thile ukonyusa imbuyekezo enokubakho kutyalo-mali. Abatyalomali bahlala basebenzisa iiakhawunti zemida xa befuna ukutyala imali kwizitokhwe okanye kwiimali, besebenzisa imali "ebolekwe" kumthengisi ukulawula indawo enkulu eqala ngemali encinci.
Ke banokuthi babe semngciphekweni wediphozithi encinci kodwa bathenge okuninzi, nto leyo ebengenakufikeleleka kubo. Umda kwi-Forex sisihloko esibalulekileyo kubarhwebi be-novice. Ke ngoko, sicebisa ukuba singene kwi-Forex kwaye sifumane yonke into ngokweenkcukacha.
Yintoni umda we-Forex ngamagama alula?
Ukuba awungeni kwiinkcukacha, umda we-Forex kuphela ubungakanani bokuthenga amandla okubonelelwa ngumthengisi ngokuchasene nediphozithi yakho.
Ukuthengisa umda kuvumela abathengisi ukuba bandise ubungakanani besikhundla sabo sokuqala. Kodwa akufuneki silibale ukuba eli likrele elintlangothi-mbini, njengoko lisonyusa inzuzo kunye nelahleko. Ukuba uqikelelo lwamaxabiso aluhambi kakuhle, iakhawunti ye-Forex ayizukufumana nto ngokuqhwanyaza kweliso kuba sithengisa ivolumu enkulu.
Kutheni umgama ubalulekile kubarhwebi be-Forex?
Abahwebi kufuneka baqwalasele umda kwi-Forex kuba oku kubaxelela ukuba banemali eyaneleyo yokuvula ezinye izikhundla okanye cha.
Ukuqonda okungcono komda kubaluleke kakhulu kubarhwebi ngelixa bengena kurhwebo lwe-Forex. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ukurhweba kwimida kunokubakho kokubini kwenzuzo kunye nelahleko. Ngenxa yoko, abahwebi kufuneka baziqhelanise nomgama kunye nemigqaliselo ehambelana nayo njengowomnxeba womda, inqanaba lomda, njl.
Lithini inqanaba lomda?
Inqanaba lomda yipesenti yemali oyifakileyo esele isetyenziselwa ukuthengisa. Iya kukunceda ubone ukuba yimalini esetyenzisiweyo kwaye ishiye malini ukuze uqhubeke nokuthengisa.
Yintoni umda wasimahla kwi-Forex?
Umda wasimahla ligunya lokuthenga elikhoyo. Umda wasimahla ubalwa njengokuthabatha umda osetyenzisiweyo kumgama opheleleyo.
Umzekelo wemida yasimahla
Masithi ndine- $ 8000 kwityala lam. Kwintengiso evulekileyo, i-2500 yeedola ibolekwe. Umda wasimahla uyi- $ 8000- $ 2500 = $ 5500. Ukuba uzama ukuvula isivumelwano esingenamali yaneleyo yasimahla, iodolo iya kurhoxiswa ngokuzenzekelayo.
Ukuxhamla kunye nomda uhambelana njani?
Ukuphakamisa kunye nomda ngamacala amabini engqekembe enye. Ukuba umda lelona xabiso liphantsi lifunekayo ukubeka urhwebo oluxhasiweyo, ke isixhobo sisixhobo esivumela umrhwebi ukuba ahambise amaqashiso amakhulu angenakufikeleleka kuye ngexabiso le-1: 1. iyafumaneka xa usebenzisa iakhawunti ye-margin ye-Forex. Yeyona "ndawo isibeki" yokwenene umahluko phakathi kwento esinayo nento esifuna ukusebenza kuyo.
Ubungakanani buhlala buboniswa kwifomathi "X: 1".
Ke, ndifuna ukurhweba ngexabiso le-USD / JPY esemgangathweni ngaphandle komda. Ndidinga i-100,000 yeedola kwiakhawunti yam. Kodwa ukuba imida yomda yi-1% kuphela, ndifuna kuphela i-1000 yediphozithi kwidiphozithi. Ukuphakamisa, kule meko, yi-100: 1.
Nge-1: I-1 iphakamisa i-dollar nganye kwi-akhawunti yakho ye-akhawunti ye-margin I-1 idola yokuthengisa
Nge-1: I-50 iphakamisa i-dollar nganye kwi-akhawunti yakho ye-akhawunti ye-margin I-50 idola yokuthengisa
Nge-1: I-100 iphakamisa i-dollar nganye kwi-akhawunti yakho ye-akhawunti ye-margin I-100 idola yokuthengisa
Yintoni ubizo lomda, kwaye ungayiphepha njani?
Ifowuni yomda yenzekile xa umrhwebi ephelelwa ngumda wasimahla. Ukuba kukho imali encinci ebekiweyo kunokuba ifunwa phantsi kwemiqathango yokuphakamisa, ukuthengisa okuvulekileyo kwi-Forex kuvaliwe ngokuzenzekelayo. Le yindlela yokunciphisa ilahleko kwaye abarhwebi abalahleki ngaphezulu kwemali ebekiweyo. Abahwebi banokuthintela umnxeba we-margin ukuba basebenzise umgama ngobulumko. Kuya kufuneka banciphise ubungakanani besikhundla sabo ngokobungakanani beakhawunti yabo.
/ Ungawufumana njani umda kwisiphelo sendlela yeMT4?
Ungawubona umda, umda wasimahla kunye nenqanaba lomda kwiwindows terminal yewindows. Le ikwayiloo festile inye apho ibhalansi kunye nokulingana kuboniswa.
Ukubala ubuninzi beqashiso kurhwebo lwemida
Ubungakanani obuqhelekileyo be-Forex yeeyunithi zemali ezingama-100,000. Nge-100: 1 yokuphakamisa, yonke i- $ 1000 yediphozithi kwiakhawunti yokurhweba ikunika amandla okuthenga e- $ 100,000. Umrhwebi uvumela abarhwebi ukuba balahle ikhulu lamawaka, ngelixa kukho iwaka lokwenyani kwidiphozithi.
Umzekelo, ukuba siza kuthenga iiyunithi zemali ezingama-10,000 kwi-1.26484 nge-400: 1, siya kufumana ngaphezulu kwe- $ 31 yomda ofunekayo. Oku kokona kubuncinci "kwesibambiso" sokuvula urhwebo kwi-Forex.
Umzekelo wentengiso yomda
Masithi umrhwebi uvula iakhawunti kunye nomrhwebi ene-1: 100. Uthatha isigqibo sokurhweba nge-EUR / USD pair pair; Oko kukuthi, uthenga ngeeuros zeedola zaseMelika. Ixabiso li-1.1000, kwaye iqashiso eliqhelekileyo yi- € 100,000. Kworhwebo oluqhelekileyo, kuya kufuneka afake i-100,000 kwiakhawunti yakhe ukuvula urhwebo. Kodwa ukurhweba ngentengo ye-1: 100, ubeka kuphela i-1000 yeedola kwiakhawunti yakhe.
Ukuxela kwangaphambili ukunyuka okanye ukuhla kwexabiso, uvula urhwebo olude okanye olufutshane. Ukuba ixabiso liyahamba ngokuchanekileyo, umrhwebi uya kwenza inzuzo. Ukuba akunjalo, ukwehla kungadlula kwidiphozithi yakho. Isivumelwano siya kuvalwa, umrhwebi uza kulahleka imali.
Ewe, ukuthengisa umda sisixhobo esiluncedo kwabo bafuna ukurhweba nge-Forex ngemali encinci yokuqalisa. Xa isetyenziswe ngokuchanekileyo, ukurhweba okunyuselweyo kukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza kwenzuzo kwaye kubonelela ngakumbi kwigumbi lokuhluka kwepotifoliyo.
Le ndlela yokurhweba nayo inokwandisa ilahleko kwaye ibandakanye umngcipheko owongezelelweyo. Ke, sigqiba kwelokuba kunzima ukungena kwintengiso yokwenyani ngaphandle kokwazi amanqaku e-Forex.
Umngcipheko wokuphulukana nayo yonke imali uphezulu kakhulu. Ngokubhekisele kwii-cryptocurrensets kunye nezinye izixhobo ezinokuguquguquka, ezinje ngesinyithi, kuphela ngabarhwebi abanamava abanenqanaba elifanelekileyo kunye neenkcukacha eziphumelelayo abanokungena apha.
Ngendlela, kuya kuba lunomdla ukwazi ukuba uyayithanda i-Forex, ukuba uyathanda ukurhweba ngemali exhasiweyo, kwaye yeyiphi eyona nto uyithandayo.